Yoga Accessories Factory - China Yoga Zvishandiso Vagadziri, Vatengesi
Pilates kudzidzisa midziyo : Dual padded non-slip handles inopa magumo akasiyana-siyana kuderedza kurwadza kwemusana, kubatsira kuvhiyiwa kugadzirisa & kukudziridza mhasuru dzakasimba muabs, makumbo, maoko, chipfuva, glutes, obliques & butt.
Haambofa akatsemuka kana kutsemuka : Yakagadzirwa kubva kune yakasimba fiberglass ine rabha rekunze sleeve, iyo mhete haigoni kukotama zvachose kana kutsemuka.Mhete yekusimba inogara ichichinja kuita denderedzwa kunyangwe mushure mekuita maekisesaizi akanyanya
Kugwinya kwakavandudzwa: Yakanakira maPilates uye kuvandudza kuenzanisa & kumira, kusimbisa musimboti, kuwedzera kuchinjika kunopa vashandisi simba rekurangarira kufamba, kuita shanduko yehupenyu hune hutano, uye pakupedzisira kuwana mwero.
Hapana dikita dhizaini : Iyo ergonomic yakakwira-density EVA foam pad inogona kutora ziya reruoko, iro rinogona kutsvedza zviri nyore panguva yekudzidzira.Chengeta kudikitira nekupika kure nekudzidziswa kwako
YOGA STRAP:Yakakosha yoga accessory uye prop yekukubatsira kudzika kutambanudza uye kugadzirisa kuchinjika uku uchibvumira mapendekete ako kuti asununguke kuitira kurongeka kwakaringana - kana iwe uchinzwa wakasungwa, tora tambo uye usaisa pangozi kukuvara nekuwedzera-kuwedzera.
STRETCH TRAP: Shandisa tambo kuti usvike kumakumbo zviri nyore pazvinzvimbo zvinonetsa uye kubata zvimisikidzo uye kutambanudza kwenguva yakareba - tora tsika yako kune inotevera nhanho uchishandisa iyo yoga tambo kudzika uye kutambanudza mitsetse kuti uwedzere kushanduka.
ACHANGEDZA METAL D-RING BUCKLE:Inoratidza nyore-kuburitsa kaviri mhete yesimbi cinch buckle inobvumidza iwe kupfupisa tambo uye kugadzira yakachengeteka loop bhendi yakachengeteka uye isingazungunuke kuitira kuti iwe ugone kutarisisa pakutambanudza kwako pasina kutsvedza.
Wholesale Custom logo Non Burst Fitness Bhora PVC Exercise Ball Yoga Ball For Balance Training
Anti Burst & Slip Exercise Bhora: Yakavakwa nehunyanzvi hwemhando PVC zvinhu, imwe yepamusoro density mabhora ekurovedza muviri pamusika.Yedu anti butst Workout yakagadzikana bhora inogona kusimuka kune yakanyanya kuomarara maekisesaizi kusvika ku2000 lbs - zvese izvi zvichikutadzisa kutsvedza.
Kusiyana-siyana Kwekushandisa: Yakanakisa chiyero mabhora ekurovedza muviri, yoga, pilates, uye kutambanudza kumba, mujimu, kana muhofisi!Zvakare zvakanaka kuzorodza kurwadziwa kwemusana, panguva yekuzvitakura, uye nekuvandudza chimiro chako & core simba.
Yemhando yepamusoro Zvinhu Uye Anti-Slip: Hunhu hwehunyanzvi neasina-chepfu PVC zvinhu, isina BPA & inorema simbi
Kushandiswa Kwakasiyana-siyana: Kwete chete yakanakira pilates, yoga, musana uye dumbu kudzidziswa uye nhumbu gymnastics kana mazana ezvishoma maitiro ekurovedza muviri, asi zvakare anogona kushandiswa semuhofisi bhora chigaro kuti uvandudze chimiro chako & kubvisa kurwadziwa kwemusana.
Inowanikwa mu5 size.
Bulk Thick Bvisa Dikita Risina Slip Cotton Yoga Towel
Super soft & Absorbent:Yogis inopopota nezvekuti akapfava sei, asi anonyudza zvakanyanya matauro edu e100% microfiber, achipa imwe yakaoma, isina kutsvedza nzvimbo yakakwana kune yogis yezviitiko zvese.
Durable & Easy Care:Muchina wekugeza uye mhepo yakaoma zvakaparadzana kutanga, zvino zvakanaka kukanda pamwe newachi yako yese.
Innovative Microfiber Material:Haasi yega tauro yeyoga ine Dual-Grip maviri-mativi chimiro.Microfiber uye Silicone coating musanganiswa ndiyo yazvino kuvandudza tekinoroji kune yechinyakare imwe microfiber yoga tauro.Iyo yakanyatsogadzirwa "grip-grid" magadzirirwo anovimbisa kugadzikana uye anokubatsira kuti ubate chinzvimbo chakareba uye chakasimba. Iyo Yoga tauro yakagadzirwa nepamusoro-soro inonwisa, yakapfava uye mwando wicking microfiber inonyorovesa hunyoro uye ziya sechiponji chihombe.
12 MavaraInowanikwa:Pink, Purple, Blue, Green, Orange, Wine Red, Light Purple, Rose Red, Sky Blue, Gray, Yellow and Brown.
Specialized Yoga Brand: Kuve inyanzvi yekugadzira chigadzirwa cheyoga kwemakore 9, tanga uye tichiri kuenderera mberi nekupa nyika yedu zvinhu zvakanakisa kuvimbisa kugutsikana kwevatengi vedu.
Shandura Upenyu Hwako:Kumashure masaja, chiyero chiri nani, kuchinjika uye kusimba kwepakati ndezvimwe zvezvakawanda zvinobatsira zvevhiri.Gadzira yakadzama asana - iyo yemuviri tsika yeyoga uye yekusimbisa kwayo masisitimu.
Premium Hunhu uye Eco-hushamwari: Yedu yoga vhiri seti yakagadzirwa eco-hushamwari TPE pachinzvimbo chehurombo PVC, iyo yakasimba, yakagadzikana, yakachengeteka, isinganhuhwi uye yakagadzikana.Iyo ABS yemukati musimboti yakasimba zvakanyanya uye inotsigira huremu hunosvika 220 lbs.
Comfort & Safe:Zvirinani pane zvigadzirwa zvakawanda mumhando uye ukobvu, Yedu Yoga Wheel inoratidza gobvu padding iripo, inochengetedza zvanza zvako, tsoka, uye musana paunenge uchiita maekisesaizi, ichipa yakasununguka uye yakachengeteka chiitiko.Kunyanya kune iyo pfungwa, haizochinjika pasi pehuremu hwako.
Dikita-Kuramba: Yemahara dikita uye tsvina, nekuda kweiyo yepamusoro 6mm padding, unogona kushandisa yako yoga vhiri seti panguva yega yega yoga kurovedza muviri zvikamu!Nekuda kwekumira kwayo dikita, yako yoga vhiri kit haizochengeta iwo muviri unonhuhwirira.